ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်အား မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်အား မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၁၁
ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
11.11 အမှတ်အသားဖြင့်ကျင်းပတတ်သည့် 11.11 (နိုဝင်ဘာလ ၁၁
ရက်တွင်ကျင်းပတတ်သည်။) အမည် ရှိအွန်လိုင်းဈေးပွဲတော်မှာ Alibaba Group ၏
အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကြီးမှူးကျင်းပလေ့ရှိသည့် ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံးသော
ဈေးရောင်းပွဲတော်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် နေရာအနှံ့သို့ လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး
အာရှပစိတ်ဖိတ်၊ ဉရောပ၊ အမေရိကနှင့် မြန်မာနိုင်ငံများသို့ပါရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
ယခုအကြိမ် ကျင်းပမည့် ဈေးပွဲတော်မှာ Shop.com.mm က မြန်မာနိုင်ငံတွင်
တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပေး သည့်အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်လည်း
ယခင်နှစ်ကထက်ပိုမိုသည့် လျှော့ဈေးများ၊ အထူးအစီ အစဉ်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
COVID-19 ကာလကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း Shop အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့သော
အခမ်း အနားများကျင်းပကာ အွန်လိုင်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု အဖြစ် တစ်တပ်တစ်အား
ပါဝင်လို ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှာ ကျယ်ပြန့်လာလျက်ရှိပြီး
အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ကာစတန်မာများ က သူတို့ဝယ်ယူလိုသောထုတ်ကုန်များကို
ပုံမှန်အနေအထားဖြင့်ဝယ်ယူ၍မရရှိနိုင်သကဲ့သို့ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့်လည်း
ထားဖြစ်လာသည်။ Shop အနေဖြင့် ထိုအချက်ကိုသိမြင်ကာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထောက် အကူဖြစ်စေရန်သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်လည်းကောင်း အကူအညီပေးရန်
“၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က စိန်ခေါ်မှုတွေအပြည့်နဲ့နှစ်ပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစိန်ခေါ်မှုနဲ့အတူ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန် မာနိုင်ငံရှိ ကာစတန်မာတွေ၊
အသေးစားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ လက်လီရောင်းချသူတွေ နဲ့
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေအတွက် ဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 11.11 က
အဲဒီဆောင် ရွက်ချက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ e-Commerce က
ကာစတန်မာတွေလိုချင် တဲ့ထုတ်ကုန် တွေ ကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အချက်ဖြစ်သလို
ရောင်းသူတွေအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့ Offline မှာမရတဲ့ ငွေတွေကို
ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 11.11 က မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့
Alibaba ရဲ့ အရောင်းပွဲတော်ဖြစ်ပြီး e-Commerce
ကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားအတွက်
ကျွန်တော်တို့ပါတနာတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ လပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ခဲ့ရ တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-Commerce industry အတွက် မှတ်တမ်းသစ်ရေး
နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မကျင်းပဖူးသေးတဲ့
အကြီးဆုံး အရောင်း ပွဲတော်တစ်ရပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်” ဟု Shop ၏ မန်နေဂျင်းဒါ ရိုက်တာ
Frans Maas ကပြော သည်။
11.11 အခမ်းအနားတွင် Shop.com.mm အနေဖြင့်ကုန်စ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၅၀၀၀
ကျော်မှ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ကို
အထူးလျှော့ဈေးများဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန် နစ်ပစ္စည်းများ၊
ဖက်ရှင်အလှအပပစ္စည်းများ၊ မိခင်နှင့်ကလေးသုံးပစ္စည်းများ၊ လူ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း
အခမ်းအနားမကျင်းပခင် တွင် အကြိုဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုလည်း နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၀
ရက်အထိကျင်းပဦးမည်ဖြစ်ကာ အထူး လျှော့ဈေးများ၊ 11.11
11.11 အခမ်းအနားကို Shop’s App မှ‌တစ်ဆင့် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Shop Application ကို
Google Play Store နှင့် Apple App Store တို့တွင် ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်မှ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ငါသိန်းကျော်ကို ၉၀
ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေး ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေးလည်းပါဝင်မည့်အပြင် discount
mechanics ဟူသည့် အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ်လည်းစီစဉ်ထားပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင်
Discount Mechanics အစီအစဉ်
11 Ks deals
ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း နှစ်သောင်းကျော်ကို ပုံမှန်ဈေးမဟုတ်ဘဲ မြန်မာငွေ ၁၁ ကျပ် (အခမဲ့) ဖြင့်
သတ်မှတ် ထားသည့်အချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Payment Partner Discount
JCB, VISA card များဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း၊ အော်ဒါမှာခြင်းများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ၁၅
ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေး ရ ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Shop အနေဖြင့် အော်ဒါမှာယူမှုအပေါ်မူတည်ကာ လျှော့ဈေးကူပွန်များပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး
ထိုကူပွန်များ ကို အသုံးပြုကာ ခြောက်သောင်းကျပ်အထိဝယ်ယူနိုင်ရန်
Shop အနေဖြင့် အခမဲ့နီးပါးဖြစ်သော ၁၅၀၀ ကျပ်တည်းဖြင့် shipping discounts
ကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ် သကဲ့သို့ shipping fees အားလုံးကိုလည်း ၉၉၅
ကျပ်တည်းဖြင့်ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများ၊ သတ်မှတ် အချိန်အတွင်း မည်သည့်နေရာကိုမဆို
အခမဲ့ပို့ ဆောင်ပေးခြင်းအခွင့်အရေးများကိုလည်းရရှိ မည်ဖြစ် သည်။
Mega Rush Hour
Mega Rush Hour အတွင်း မည်သည့် Official store တွင်မဆိုအော်ဒါမှာဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်
Save Flat 10%, up to 10,000Ks အစီအစဉ်လည်းပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Official Stores
များသည် အရည် အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို
အာမခံသောတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အရောင်းဆိုင်များ ဖြစ်သည်။
ထိုစတိုးများတွင်ဝယ်ယူပြီး မကြိုက်လျှင် ပစ္စည်းကို ၁၄ ရက်အတွင်းအခမဲ့ပြန်ပို့ပေးနိုင်ရန်
Mega Deals! မှာ လျှော့ဈေးများကို အကြီးအကျယ်ချထားသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ Mega
Deals discounts များမှာ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ မရနိုင်သောဈေးနှုန်းများဖြစ်သည်။
App Visit Challenge
Shop App သို့ နေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကာ ငါးသောင်းကျပ်အထိ ကံထူးနိုင်မည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
ထိုအပြင် အထူးလျှော့ဈေးများ၊ ကူပွန်များလည်း App ကို
Refer &amp; Win
Shop’s new referral program အရ Shop App ကို သူငယ်ချင်းများထံမျှဝေအသုံးပြုစေပါက
Shop First Games (SFG) Gaming Week
Shop ၏ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် Shop First Games (SFG)
ဂိမ်းအစီအစဉ်တွင် အနိုင်ရရှိသူများအား ဆုကူပွန်များနှင့် လျှော့ဈေးများပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းကစားပြီး သုံးသောင်း ကျပ်အထိ ကူပွန်များရရှိနိုင်ကာ ထိုကူပွန်ကို 11.11 ၏ Shop First
Games တွင် အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
App ကိုသုံးပြီး Mission များကို ဆောင်ရွက်ကာ
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် App ရှိ Cart ထဲသို့ ကိုယ်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး item များ
ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ SFG ဂိမ်း ငါးမျိုးကိုကစားခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများကို Mega
Deals သုံး ခုမျှဝေခြင်း အစရှိသည့် ပျော်ရွှင်ကောင်းသော အစီအစဉ်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Shop App ကို ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပြီး Shop.com.mm 11.11 The World’s Biggest Sale
အထူးလျှော့ဈေးအမျိုးမျိုးကိုရရှိမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ၉၅၅ ကျပ်မှ စတင်၍
ကုန်ပစ္စည်းမိမိတို့၏လက်ထဲရောက်မှသာ ငွပေးချေမှုစနစ် (cash-on delivery)၊ JCB ကဒ်၊ VISA
ကဒ် င့် Mastercard စသည့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များဖြင့်လည်း လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ပိုမိုကျေနပ်မှုရှိစေရန်အတွက် မိမိတို့ဝယ်ယူထားသော
ကုန်ပစ္စည်းများအဆင်မပြေမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် (၇)ရက်အတွင်း
အခမဲ့ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်အားလုံးတွင် ပျာ်စရာပရိုမိုးရှင်းများနှင့်အတူ
အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများလည်း အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်များတွင်
မယုံနိုင်လောက်တဲ့အထူးလျှော့ဈေးတွေနှင့်အတူ Daily Flash Sales
တွေလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအန့ှံတလွှားမှ ရာင်းချသူတွေအနေဖြင့် သူတို့ရဲ့
Global Collection တွေမှာလည်း ရွးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေအုံးမှာဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ShopMart မှာလည်း ကုန်စုံပစ္စည်းများနှင့် အခြေခံမရှိမဖြစ်လိုအပ်
သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပါ ရာင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်
အဝတ်အစားတွေဝယ်လိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းအသစ်ဝယ်ယူလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဆိုဖာ၊ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများအပြင်
စားသောက်ကုန်များကိုလည်း ကျွနု်ပ်တို့၏ Shop တွင် စိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Shop MM သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး e-commerce ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး
ဝယ်ယူသူများကို သန်းပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းများအား အမျိုးအစား အလိုက်ခွဲပြီး
ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ Shop.com.mm ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ Alibaba က အပြီးတိုင်
ဝယ်ယူခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၀ယ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများအား Virtual Marketplace
သို့အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်စတင်ပြု လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်ကတည်းကပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ e-Commerce ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်သို့
ရောက်အောင်ကူညီရန် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနည်းပညာကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် Shop
အနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းတစ်သန်းကျော်ကို ချက်ချင်းလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန်
ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကုန်ပစ္စည်း များကို ဖြန့်ဖြူးပေးသည့်
ထောက်ပံ့ပိုးဆောင်ရေးကွန်ရက်ကိုလည်း လုပ်ကိုင် လျှက်ရှိသည်။
THE WORLD’S BIGGEST SALE is coming to Myanmar on November 11th - November
11.11 (November 11th) is the biggest online sales event in the world. It was originally set up by the Alibaba Group, Shop’s parent company, asasymbolic celebration for singles (11.11). This mentality quickly spread throughout the world, and now 11.11 is now celebrated across the Asian Pacific, Europe, America, and now Myanmar!
This is the 3rd year that Shop.com.mm is bringing 11.11 to the people of Myanmar and will castashadow over last year’s event. This year promises to be, once again, the biggest sale in the history of Myanmar!
Despite the challenges the world has faced in the time of COVID19, Shop feelsaresponsibility to continue supporting economic activity online. Economic slowdowns have been widespread and this has resulted in customers not having access to their normal array of goods and financial troubles for businesses who can not reach their customer base. Shop sees themselves inaposition to help not only stir up sales for businesses, and particular SMEs in Myanmar, but also to give people something to be excited about during this period.
According to Shop’s Managing Director, Frans Maas, “2020 has beenachallenging year, but with that challenge we have seenanew level of dedication from our teams to continue serving customers and SMEs, retailers and brands in Myanmar. 11.11 is part of that. Even more so than ever, e-commerce is the solution for customers to have access to products, and sellers to gain revenue when they have less or no revenue from their offline channels. 11.11 is the biggest yearly sale of Alibaba and of Shop in Myanmar, in which we will elevate the e-commerce industry toanew level. We have prepared for months, and together with our brand partners, payment partners, SMEs, retailers, logistics partners, and customers, we will set new records for the Myanmar e-commerce industry. It is truly going to be the biggest sales event Myanmar has ever seen.”
During the 11.11 campaign, Shop.com.mm will showcase over halfamillion products from thousands of sellers across their platform at steep discounts, from electronics and fashion to mother and baby and lifestyle. Shop commits to having diverse selections at unbelievable prices. They will also holdapre-sale event from November 1st to 10th, where they will also offer special discounts as well as sneak peaks about the crazy deals to look for in 11.11.
This event will take place on Shop’s App, which can be downloaded from Google Play Store and Apple App Store here.
To give you an idea of how crazy and vast this event is, there will be up to 90% discount on over5lakh products from over 5,000 sellers!
Plus, Shop has plannedanumber of what they call “discount mechanics”, which are basically activities and timelines where you can get special discounts. Check out some of the discount opportunities below:
More than 20,000 items will be discounted from their normal price all the way to 11 kyats (FREE) at specified times.
Get 15% OFF your order when you pay with JCB or VISA card instead of cash on delivery.
Shop will give away flat discount coupons depending on the size of your order. You can get up to 60,000 MMK off your order with sitewide coupon giveaways.
Shop will offerarange of shipping discounts like FREE Shipping up to 1500 MMK as well as periods where all shipping fees will be discounted to 995Ks on any purchase, and more! Get FREE or discounted delivery on any purchase to any location during specific times of the day.
Save Flat 10%, up to 10,000Ks, on your order from any Official Store and brand on Shop during Mega Rush Hour! Official Stores are official brands who guarantee the best quality products. They also offer FREE returns within 14 days.
Shop will have loads of products heavily discounted in Mega Deals! Mega Deals discounts are so steep you will be hard pressed to find better prices anywhere else!
You can get special discounts and coupons just for opening the app! Win up to 50,000Ks when you visit Shop App daily!
With Shop’s new referral program you can win up to 10,000Ks by referring your friends to the Shop App.
Shop is also offering discounts and coupon prizes for winners and high scorers on their new gaming platform, Shop First Games (SFG), from November 1st - 10th. You can play games and win coupons of up to 30,000Ks to use on 11.11 on Shop First Games.
You can win coupons of up to 10,000Ks by completing missions on the app, such as: add your favorite item to your cart, play any5games on SFG, share3Mega Deals with your friends, more many more fun and easy missions!
To participate in Shop.com.mm 11.11 The World’s Biggest Sale, download Shop App and register now!
In addition to offeringavariety of discounts, Shop offers nationwide delivery starting from 995Ks. Plus, they accept cash-on delivery (COD), JCB, VISA, and Mastercard payment! They also offer FREE returns within7days on their products so you can shop risk free. Most of all, Shop always has fun promotions and the best products. They have Daily Flash Sales with crazy discounts, they haveahuge selection in their Global Collection with sellers from all over the world, and they even sell groceries and essentials on ShopMart. Whether you need clothes,anew phone,asofa, make-up, or even groceries, you can order it on Shop!
Shop MM is the leading online shopping platform in Myanmar, empowering thousands of sellers to connect with millions of customers. Shop was acquired by Alibaba in May 2018. Since then, Alibaba has provided its world-class technology to help Shop take ecommerce in Myanmar to an international standard. Currently, Shop provides immediate and easy access to over 1 million products sold by sellers in many different categories, and operatesalogistics network that delivers products nationwide.